Kitchen Items Factory |China Kitchen Items Manufacturers, Suppliers
Ity lovia baolina gilasy Silicone ity dia vita amin'ny akora sakafo kalitao avo lenta.BPA maimaim-poana, tsy misy fofona, tsy misy poizina.Azo antoka sy mateza. Mora ny mamoaka ranomandry izy ireo, Atsipazo tsotra izao ny fitoeran-dranomandry.Apetraho ambony ambany ny lovia dia hanana gilasy boribory tsara ianao!
Ity tsihy ity dia lovia vita amin'ny macaron vita amin'ny silicone tsy misy BPA - vita amin'ny silicone kilasy sakafo ary fibre vera nohamafisina, mivaingana amin'ny mavo aorian'ny hafanana 4 ora, ity lovia fanaova macaron ity dia mahatanty hafanana hatramin'ny 480℉ tsy misy fofona na setroka.
Ny lasitra baomba vita amin'ny sôkôla silikôla mafana dia vita amin'ny silicone 100% amin'ny sakafo ary mora ampiasaina, madio. Tsy miraikitra izy ireo, mora mamoaka izay apetrakao mora.Hahazo baomba kakaô/sôkôla malefaka sy mamirapiratra ianao! Fitaovana fanamboarana lasitra DIY sy lasitra sôkôla ve no tianao.
Anaran'ny vokatra: Mouffin Cupcake Silicone Mould
Ireo silicone runner bar mats dia tonga lafatra ho an'ny Bars, Machines Kafe, lakozia, latabatra fisakafoana, Barber, Litter Box Mats ho an'ny filanao rehetra.Izy ireo dia vita amin'ny fingotra tsy misy poizina, Ny tsihy fingotra bar dia mavesatra, tsy mitongilana ary mety ho an'ny tanjona ara-barotra sy an-trano.Tsara ho an'ny fanamainana barware, manolotra zava-pisotro na eo amin'ny sisin'ny dobonao.